Yesaia 28 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Efraim asabofo nnue! (1-6)
Yuda asɔfo ne adiyifo de wɔn ti pempem (7-13)
“Yɛne Owu ayɛ apam” (14-22)
Sion ntwea so bo a ne bo yɛ den (16)
Yehowa anwonwadwuma (21)
Mfatoho a ɛkyerɛ sɛ Yehowa nteɛso yɛ papa (23-29)
28 Due! Efraim asabofo ahenkyɛw* kɛse,*+N’anuonyam fɛfɛɛfɛ a ɛte sɛ nhwiren bi a ɛretwintwamA wɔde abɔ kurow a ɛda asaase pa subon no atifi, baabi a wɔn a nsã* de wɔn ayɛ nkoa no te no! 2 Hwɛ! Yehowa wɔ ɔhoɔdenfo bi a ɔyɛ ɔkatakyi. Na ɔbɛtow ato fam ahoɔden soTe sɛ asukɔtweaa a ɛretɔ a aprannaa nam mu, te sɛ mframa gyampantrudu a ɛsɛe ade,Te sɛ nsu a ɛretɔ denneennen a aprannaa nam mu a ayiri rebu fa so. 3 Efraim asabofo ahenkyɛw akɛse* no,Wobetiatia so.+ 4 Na n’anuonyam fɛfɛɛfɛ a ɛte sɛ nhwiren a ɛretwintwamA wɔde abɔ kurow a ɛda asaase pa subon no atifi no,Ɛbɛyɛ sɛ borɔdɔma a edi kan ba ansa na ahohuru bere adu no. Sɛ obi hu a, ɔtew, na ntɛm ara na wamene. 5 Saa da no, asafo Yehowa bɛyɛ sɛ anuonyam ahenkyɛw ne nhwiren abotiri fɛfɛɛfɛ ama ne manfo a wɔaka no.+ 6 Na ɔbɛyɛ atɛntrenee honhom ama nea ɔtena ase bu atɛn, na wama wɔn a wɔbɔ kurow pon ho ban fi atamfo nsam no ahoɔden.+ 7 Eyinom nso, nsã* ama wɔafom kwan;Wɔn nsã a ɛbow ama wɔde wɔn ti pempem. Ɔsɔfo ne odiyifo nso, nsã a ɛbow ama wɔafom kwan;Nsã* ama wɔn adwene atu afra.Wɔn nsã a ɛbow ama wɔde wɔn ti pempem;Wɔn anisoadehu ma wɔfom kwan,Na wohinhim wɔ atemmu mu.+ 8 Na ɛfe pɔtɔɔ ayɛ wɔn apon so ma;Baabiara nni hɔ a ebi nni. 9 Hena na obi bɛkyerɛ no nimdeɛ,Na hena na obi bɛma wate asɛm no ase? Wɔn a wotwaa wɔn nufu nkyɛe anaa?Anaasɛ wɔn a afei ara na wɔatew wɔn afi nufu ano? 10 Na ɛyɛ “mmara-mmara, mmara-mmara,Susuhama-susuhama, susuhama-susuhama,+Ɛha kakra, ɛhɔ kakra.” 11 Enti ɔnam wɔn a wɔpo dodow* ne ahɔho kasa so na ɛbɛkasa akyerɛ ɔman yi.+ 12 Bere bi ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ahomegyebea ni. Momma nea wabrɛ nhome; ahotɔbea ni,” nanso wɔantie.+ 13 Enti wobebu Yehowa asɛm sɛ: “Mmara-mmara, mmara-mmara;Susuhama-susuhama, susuhama-susuhama;+Ɛha kakra, ɛhɔ kakra,” Sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wɔrenantew a,Wobehintiw na wɔabu ahwe wɔn akyi,Na wɔabubu wɔn na wɔatɔ afiri mu ama ayi wɔn.+ 14 Ɛno nti, muntie Yehowa asɛm, mo a mohoahoa mo ho,Mo a mudi ɔman yi so wɔ Yerusalem, 15 Na moaka sɛ: “Yɛne Owu ayɛ apam,+Na yɛne Ɔdamoa* ayɛ nhyehyɛe.* Sɛ nsu a ayiri na ɛrebu fa so no retwam a,Ɛremma yɛn so,Efisɛ yɛde atoro ayɛ yɛn guankɔbea,Na yɛde nkontompo ayɛ yɛn hintabea.”+ 16 Enti nea Awurade Tumfo, asafo Yehowa, aka ni: “Mede ɔbo a wɔasɔ ahwɛ+ reto fapem wɔ Sion,Ntwea so bo a ne bo yɛ den+ a wɔde ato fapem denneennen.+ Na obiara a onya mu gyidi no remmɔ hu.+ 17 Mede atɛntrenee bɛyɛ susuhama+Na mede trenee ayɛ prumo.*+ Asukɔtweaa bɛpra atoro guankɔbea no akɔ,Na nsu ayiri afa hintabea no. 18 Apam a mo ne Owu yɛe no begu,Na nhyehyɛe a mo ne Ɔdamoa* yɛe no rennyina.+ Sɛ nsu a ayiri na ɛrebu fa so no retwam a,Ebetwiw afa mo so. 19 Bere biara a ebetwam no,Ɛbɛfa mo akɔ;+Efisɛ ebetwam anɔpa biara;Awia ne anadwo nso, ebetwam. Ehu nko ara na ɛbɛma wɔate nea wɔtee no ase.”* 20 Mpa no yɛ tiaa, enti obi ntumi nteɛ ne nan mu wɔ so,Na ntama* no sua, enti entumi nkata ne ho nyinaa. 21 Na Yehowa bɛsɔre agyina sɛnea ɔyɛe wɔ Perasim Bepɔw so no;Ɔbɛwosow ne ho sɛnea ɔyɛe wɔ Gibeon bon mu* no,+Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ n’ade, n’anwonwade no,Na wadi ne dwuma, n’anwonwadwuma no.+ 22 Enti munnni fɛw,+Na wɔansan ammia mo hama no mu,Efisɛ mate afi Awurade Tumfo, asafo Yehowa hɔ sɛ,Wasi gyinae sɛ ɔbɛsɛe asaase no nyinaa pasaa.+ 23 Monyɛ aso na muntie me;Monyɛ komm na muntie nea mɛka. 24 Okuafo funtum asaase da mu nyinaa ansa na wagu aba anaa? Ofuntum asaase siesie so daa anaa?+ 25 Sɛ osiesie asaase no ani wie a,Ɔpete pɛprɛ wɔ so na odua nketenkete* wɔ so, ɛnte saa?Odua hwiit ne awi* ne baali* wɔ baabi a wɔatwa ato hɔ, ɛnte saa?Na odua kɔkɔte*+ wɔ ne hye so, ɛnte saa? 26 Ɔkyerɛ no ɔkwampa;*Ne Nyankopɔn kyerɛkyerɛ no.+ 27 Ɛnyɛ awiporow ade+ na wɔde porow pɛprɛ,Na ɛnyɛ teaseɛnam nan na wɔde fa nketenkete* so. Mmom abaa na wɔde boro pɛprɛ,Na poma na wɔde boro nketenkete. 28 Sɛ obi reboro hwiit* a ɔde bɛyɛ paanoo a, ɔboro ma ɛyɛ muhumuhu anaa? Daabi, ɔmmoro no afebɔɔ;+Na sɛ ɔde ne teaseɛnam a n’apɔnkɔ twe fa so a,Ɔmmoro mma ɛnyɛ muhumuhu.+ 29 Eyi nso fi asafo Yehowa hɔ,Nea n’agyinatu* yɛ nwonwa,Na ne nnwuma yɛ akɛse no.*+
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Efraim ahenkurow Samaria ho.
^ Anaa “ahantan abotiri; dwae abotiri.”
^ Nt., “ano a ɛpo dodow.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “anya anisoadehu baako.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Sɛ wɔte ase a, ɛbɛma wɔn ho apopo.”
^ Kyerɛ sɛ, ntama a wɔanwene.
^ Ɛyɛ biribi a yɛde yɛ aduan ma ɛyɛ huam.
^ Ebinom nso frɛ no “atoko.”
^ Ɛte sɛ hwiit, na na wɔtaa dua wɔ tete Egypt.
^ Anaa “Ɔteɛ no so ɔkwampa so; Ɔtwe n’aso ɔkwampa so.”
^ Anaa “n’atirimpɔw.”
^ Anaa “Na ne nyansa nni ano no.”